မြင့်မားသောစွန့်စားမှု Merchant Accounts နှင့်ကမ်းလွန်ကဒ်ထုတ်ယူခြင်း
Offshore Merchant Accounts နှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုခရက်ဒစ်ကဒ်ထုတ်လုပ်ခြင်း
A မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့် မကြာခဏတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ် ဦး သည်နိုင်ငံတကာဘဏ်အကောင့်ကို အသုံးပြု၍ အကြွေးဝယ်ကဒ်ကို အသုံးပြု၍ ရရှိသောငွေများကိုလက်ခံရရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်သင်၏ကမ်းလွန်စီးပွားရေးအကောင့်ထဲသို့ ၀ င်ငွေရနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုန်သည်အကောင့်ပံ့ပိုးသူများသည်မည်သူမဆိုနှင့်မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကိုမဆို“ အန္တရာယ်ကြီးသောစီးပွားရေး” အဖြစ်တံဆိပ်ကပ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်သင့်အားအကြွေးဝယ်ကဒ်ပြားကုန်သည်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုသည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီများသည်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်လျှောက်လွှာတင်သည့်အချိန်တွင်ပြုလုပ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သူတို့သည်မြင့်မားသောပြန်အမ်းငွေနှုန်းရှိသောမြင့်မားသောစွန့်စားမှုရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအမျိုးအစားခွဲခြားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်လျှောက်ထားသူသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားသည်တင်းကြပ်သော underwriting စံနှုန်းများနှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်လျှောက်လွှာများကိုပယ်ချခြင်းကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ အကယ်၍ ဤအရာသည်သင့်အတွက်ဖြစ်လျှင်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုခရက်ဒစ်ကဒ်ကုမ္ပဏီကိုအဖြေပေးနိုင်သည်။
Credit Card ကိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း
မြင့်မားသောအန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့်အတွက်အထူးပြုတဲ့ခရက်ဒစ်ကဒ်အပြောင်းအလဲနဲ့ပံ့ပိုးပေးနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါသူတို့အများဆုံးဖွယ်ရှိသင့်လျှောက်လွှာကိုအတည်ပြုမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်, ဒီကပါဝင်ပတ်သက် ကမ်းလွန်ဘဏ် တစ်ခုနှင့်ကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့်။
များသောအားဖြင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုကုန်သည်များသည်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုနှုန်းထားများကိုပေးဆောင်ကြလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည် 98% ရောင်းချသူများ၏လက်ရှိအခက်အခဲများကို ကျော်လွန်၍ အပြောင်းအလဲနဲ့အခကြေးငွေများကိုကျွန်ုပ်တို့သက်သာသည်။ ၎င်းသည်၎င်းတို့တွင်အနိမ့်၊ အလတ်စားသို့မဟုတ်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုလိုအပ်ချက်ရှိမရှိကိစ္စဖြစ်သည်။ သတိထားပါ၊ အကြောင်းမှာကြိုတင်စာချုပ်များနှင့်အဓမ္မနှုန်းထားများဖြင့်လျှောက်ထားသူများကိုအလိုအလျောက်အတည်ပြုပေးမည့်ပံ့ပိုးပေးသူများစွာရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏စာချုပ်ကိုအမြဲစစ်ဆေးပြီးငွေပေးငွေယူနှုန်းကိုလျှော့ချရန်အတွက်စံသတ်မှတ်ချက်များရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ ဥပမာ၊ ပိုမိုကြီးမားသောသိုက်၊ လှိမ့်သောအရံသဘောတူညီချက်များနှင့်အခြားအန္တရာယ်လျှော့ချရေးအမျိုးအစားများသည်လျှောက်ထားသူအားအကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကူညီနိုင်သည်။
ကုန်သည်ပံ့ပိုးပေးသည်၎င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းများကြောင့်မြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုတံဆိပ်ကပ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုင်ရှင်မကောင်းတဲ့အကြွေးရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အမေရိကန်အတွင်း၌အရောင်းအနှင့်အတူနိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်း entity စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။ တနည်းအားဖြင့်ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတချို့ဒေသဆိုင်ရာ, ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေများနှင့်အညီတရားမဝင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တောင်မှမေးခွန်းထုတ်စရာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးသို့မဟုတ်ရောင်းအားနည်းပရိယာယ်တခုအလှည့်ဆင်းစေနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်များစွာသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတစ်ဦးကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့်အွန်လိုင်းအကြွေးဝယ်ကတ်များကို process ဖို့သာ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ တဦးတည်းရှိသည်နိုင်ရန်အတွက်အများစုကုန်သည်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ရှိသည်ဖို့သငျသညျလိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာတစ်ဦးကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်နှစ်ခုလုံးကိုတက် setting ကိုဆိုလိုသည်။
လူအများစုဟာအမြင့်ဆုံးစွန့်စားမှုကုန်သည်အကောင့်အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံသို့မဟုတ်ဆေးဆိုင်များအဘို့ကိုသာဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်ယနေ့ငွေချေးလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဘဏ္ဍာရေးအကောင့်လိုအပ်ချက်များကိုအတူယုံကြည်စိတ်ချရကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် "မြင့်မားသောအန္တရာယ်။ " သို့ဖြစ်. သူတို့တစ်တွေအထူးပြုခရက်ဒစ်ကဒ် Processor ကိုလိုအပ်သည်။ ဤတွင်မကြာခဏမြင့်မားသောအန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့်လိုအပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်။
အမေဇုံ, Yahoo ကသို့မဟုတ် Google Stores
cashing န်ဆောင်မှု Check
credit သို့မဟုတ်ကြွေးမြီပြုပြင် & အကြွေးအကြံပေးခြင်း
ကို eBay Store က
E-Books (copywritten ပစ္စည်း)
ဖြစ်ရပ်လက်မှတ်ပွဲစားများ (လိုင်စင်မဲ့နှင့်မဟုတ်တဲ့မှတ်ပုံတင် (ဆိုလိုသည်မှာ Stub Hub အမျိုးအစားကုန်သည်))
ဖက်ဒရယ်သေနတ်လိုင်စင် (FFL) ကုန်သည်တွေ
သွယ်ဝိုက်ဘဏ္ဍာရေးအတိုင်ပင်ခံ (ဆိုလိုသည်မှာသင့်လျှပ်စစ်စွမ်းအားဘီလ်လျော့ချခြင်းဖြင့်ငွေ Save လုပ်နည်း။ )
"Get ကြွယ်ဝသောလျင်မြန်" စာအုပ်တွေ, ပရိုဂရမ်, etc
"ဘယ်လို-ရန်" အမျိုးအစားက်ဘ်ဆိုက်များ (ဆိုလိုသည်မှာ "အင်တာနက်ပေါ်မှာငွေရှာရန်ကဘယ်လို-Learn")
Horoscopes, နက္ခတ်ဗေဒင်သို့မဟုတ်အဘိဥာဏ်န်ဆောင်မှုများ (ဆိုလိုသည်မှာကံဇာတာ Teller)
Hypnotists သို့မဟုတ် Self-hypnosis
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရေကြောင်း, ကုန်တင်သို့မဟုတ်သွင်းကုန် / ပို့ကုန်
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟာဗျူဟာ & ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစာအုပ်များ
မဂ္ဂဇင်းအရောင်းနှင့် subscriptions ကို
(12 လအတွင်းကျော်) အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့အစည်းများ
အဆိုပါရပ်စဲကုန်သည်ဖိုင် (TMF စာရင်း) ရက်နေ့တွင်ကုန်သည်
multi-level ကိုစျေးကွက် (MLM)
ဂီတ, ရုပ်ရှင်, ဆော့ဖ်ဝဲ downloads, သို့မဟုတ်အပ်လုပ်တင်ထားသည်များ (ဆိုလိုသည်မှာ။ copy-တိကျမ်းစာ၌လာသည်ဂီတ, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ် software ကို (ဆိုလိုသည်မှာ Microsoft ကရုံး))
ဘောင်း-in သို့မဟုတ်အပြင်ထွက် telemarketing န်ဆောင်မှုများ
replica လက်ကိုင်အိတ်, နာရီ, ပိုက်ဆံအိတ်, နေကာမျက်မှန်စသည်တို့? (ခေါက်-off)
စသည်တို့ကိုကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေး, ငရုတ်ကောင်းမှုန်ရေမွှား, mace,
social networking site များ? Facebook, Twitter MySpace စသည်တို့?
အားကစားဆိုင်ရာကြိုတင်ခန့်မှန်းသို့မဟုတ် / လောင်းကစားရာတွင်အလေးသာမှု
ကုန်သည် (ဆိုလိုသည်မှာငွေပေးချေမှုပရိုဆက်ဆာ, အားလပ်ရက်ငှားရမ်းပွဲစားများ) တွက် third-party အပြောင်းအလဲနဲ့,
ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို & ခရီးသွားအေဂျင်စီများ
အားလပ်ရက်ငှားရမ်းခြင်း (property ကိုကုန်သည်ကပိုင်ဆိုင်သည်မဟုတ်လျှင်)
ဗီတာမင်နှင့်ဖြည့်စွက်ရောင်းအား? အစားအသောက်များတွင်ဆေးပြား, ဆေးညွှန်းဆေးပြား, ကျန်းမာရေးဖြည့်စွက်, ဆေးဆိုင်
မည်သည့်မျိုးလက်နက်များ: သေနတ်များ, ဓါး, Stun သေနတ်များ, ဒါမှမဟုတ် ammo ။ လက်နက်တွေမဆိုစိတျအပိုငျး (ဆိုလိုသည်မှာ Butt, အစပျိုးခြင်း, မဂ္ဂဇင်းများ, etc) တို့ပါဝင်သည်။
သင်တစ်ဦးကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်များနှင့်ကုန်သည်အကောင့်ရှိပါကသဘာဝ, သငျသညျကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် အခွန် လိုက်နာခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, အမေရိကန်, ဗြိတိန်, ကနေဒါ, သြစတြေးလျနဲ့တခြားနိုင်ငံများရှိလူဦးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ဝင်ငွေခွန်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးလိုင်စင်ရအခွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထံမှအသံသည်အခွန်အကွံဉာဏျကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သေချာပါစေ။
တစ်ဦးအမြင့်အန္တရာယ်ကုန်သည်အကောင့် Set Up လုပ်နည်း
ဒီဖတ်ပြီးနောက်, သင်ကမြင့်မားသောအန္တရာယ်ကမ်းလွန်ကုန်သည်အကောင့်သင်တို့အဘို့အမှန်သည်ထင်သနည်း သို့ဆိုလျှင်ဤစာမျက်နှာပေါ်ရှိဖုန်းနံပါတ်များကိုသို့မဟုတ်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံအသုံးချပါ။ သင်ပြုသည့်အခါ, သင်နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များပေးနိုင်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားဟောပြောနိုင်ပါတယ်။
> ကျအခနျး 10 မှ